PATTANAYON CHONBURI CO.,LTD.
View : 992
CASTROL ဆီ, လှေဆီ, လှေဂီတာဆီ, ကတ်စ်တရောဂီယာဆီ
လှေအမျိုးတိုင်းအတွက် အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ချောဆီဖြစ်သည်။ တာဘိုရှာ့ချာစက် ပါ (သို့) မပါသော4ရိုက်ချက်အင်ဂျင်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ငါးဖမ်းလှေများ, ဆွဲလှေများ, သမုဒ္ဒရာရေယာဉ်များ, ဖြတ်ကူးသင်္ဘောများ, ခရီးလှေတို့အဖြစ် လှေ (သို့) အင်ဂျင်တို့ကို သင့်တော်သည်။
2. လောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကျန်ကြွင်းကောင်းစွာပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
6. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် ကူညီစေသည်။
ထောက်ခံလက်မှတ်။ ။ API CH-4/CF-SJ
ပါဝါမီးစက်များ, ဘင်စင်-ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ, မြက်ရိတ်စက်မျိုးတိုင်း, လှေအင်ဂျင်-ဂီယာများ, စက်မှုမီးစက်များ, အဆင့်အတန်းမြက်ရိတ်စက်, ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်များ, ဈေးပေါ့သည့်မီးစက်များ, ဘင်စင်-ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်များဆိုင်ရာ ရောင်းချသူဖြစ်သည်။ မီးစက်များကို ရောင်းချသည်။ ပါဝါမီးစက်များ, မီးစက်များဆိုင်ရာဖြန့်ဝေသူဖြစ်ပါသည်။ မီစက်တန်ဖိုး မီးစက်စင်တာ ပါဝါမီးစက်များငှားရမ်းရန် ပါဝါမီးစက်များ နေ့စဉ်ငှားရန် ပါဝါမီးစက်များ လစဉ်ငှားရန် ပါဝါမီးစက်များ နှစ်စဉ်ငှားရန် ချွန်ပူရီဖထနာယွန် ကုမ္ပဏီ လီမီတက် ၏ ဒီဇယ်လှေအင်ဂျင်များ
ချွန်ပူရီဖထနာယွန် ကုမ္ပဏီ လီမီတက် ( PATTANAYON CHONBURI CO., LTD.)
ချွန်ပူရီဖထနာယွန် ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် အင်ဂျင်များ, လှေဂီယာများ, စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်များ, မြက်ရိတ်စက်အမျိုးမျိုး, မီးစက်များ, (နှင့်) အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ မြက်ရိတ်စက်နှင့်မီးစက်များအားလုံးသည့်ထုတ်လုပ်ပြုပြင်သူဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါမီးစက်, မီးစက်များ, မြက်ရိတ်စက်များတို့ကို ရောင်းချသည်။ အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အလိုက် စက်ပစ္စည်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေရန် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (နှင့်) ISO 14001 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေကိုရရှိသည့်အဆင့်မြင့်စက်ရုံမှ အစိတ်အပိုင်းတို့ကို တင်သွင်းသည်။
ပါဝါမီးစက်များ, ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်များ, မြက်ရိတ်စက်များ, မီးစက်ဖြန့်ဖြူးသူ, ဈေးပေါ့သည့်မီးစက်များ, ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်ဖြန့်ဖြူးသူ, အဆင့်အတန်းမြက်ရိတ်စက်, လေစုပ်စက်များ, မီးစက်များ, အဆင့်မြင့်မီးစက်များ တို့အဖြစ် ချွန်ပူရီဖထနာယွန် ကုမ္ပဏီ လီမီတက်
ချွန်ပူရီဖထနာယွန် ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရေခဲစက်ရုံများအတွက် မီးစက်တပ်ဆင်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် အရွယ်အစား 1000 KVA2စုံ ပါသည့် PATCO POWER မီးစက်ကို ဖြစ်သည်။
PATCO GENERATING SET
ဒီဇယ်အင်ဂျင် IVECO model 8210Sri27 + MECC ALTE ECO 38-2L အရွယ်အစား 300 KVA + ATS
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံ၏ Phongsavanh Bank ငွေအပ်နှံသူ
PATTANAYON CHONBURI CO.,LTD. (M)
ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက် PATCO ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
လှေဂီယာ (နှင့်) PTO ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
40 Village No. 13, Bang Na-Trat Road, Km 8 Road, Tambon Bang Kaeo, Amphoe Bang Phli, Province Samut Prakan 10540
+662 316 840 8